Dowlada Itoobiya oo isku diyaarinaysa dagaal ay la gasho dalka Masar iyadoo hub casri ah ka dalbatay dalka Fransiiska | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Published on March 9, 2020 by sdwo · No Comments
Wergeys ka soo baxa dalka Faransiiska oo la yiraah LE Point oo ah Weekly French Political News & Magazine ayaa daabacay inay heleen warqad sir ah oo Raysawasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu Fransiiska kaga codsanayo hub casir ah sida Diyaaradaha dagaalka ee Fransiisku seemyo ee Rafale fighters jet iyo Mirage 2000 oo ah 12 diyaaradood, 18 Diyaaraha qumaatiga u kaca ee loo yaqaano Helicopters, labo diyaaradaha waaweyn ee ciidanka daabula ee ay samayso shirkada Airbus. 10 diyaradaha loo yaqaano Drones ee aan duuliyahu wadin. Qalabka jaam gareeya Raadaalada ( Electronic jamming system) iyo 30 xabo ee gantaalaha loo yaqaano M51 Missiles oo gaadhi kara 6 kun oo Kilometres welibana awood u leh inay xanbaaran madaxyada hore ee hubka Nuclear warheads ka.
Warqadaa codsiga ah wuxuu Raysawasaaraha Itoobiyi uu u soo direy madaxweyna dalka Faransiiska Emmanuel macron isagoo kaga codsaday in faransiisku ka caawiyo dhismaha iyo quwadaynta ciidanka cirka ee Itoobiya ee hubka khatarta ah ee casirga ah.
Wargeyska ayaa sheegay inay sharcidaro tahay in itoobiyi ay faransiiska ka codsato hubka wax gumaada ee Nuclear ka maadama Faransiiska iyo Itoobiyiba ay ka mid yahiin saxeexayaasha diidmada hubka wax gumaada (The None-Proliferation Treaty).
Bishii October ee 2019kii ayaa raysawasaaraha Itoobiye yidhi Hadii dagaal ku dhexmaro itoobiya iyo masar daamka biyaha ee itoobiyi ka samaysanyso webiga Nile diyaar baanu u nahay in maaalyiin qof aan diyaarino laakiin waa in wadahadalo laga galaa sidii loo dejinlahaa xaalada.
Dhismaha Daam kan weyn baa socday tan iyo 2012kii isagoo imika 70% la dhamaystiray iyadoo aqoonyahanada caalamkuna sheegeen inay biyo yaraan ku keeni karto wadama Sudan iyo Masar. Dalka Masar baa aad uga werwersan in daam kani iyo biyo yaraan weyn u keeni karo maadama biyaha la cabo iyo kuwa beerahuba iyo ku warshadahu ku shaqeeyaanba ay ka yimaadaan webiga Nile.
Dhinaca kale dowlada maraykanka ayaa iyadu cadaadis ku saaraysa in itoobiye heshiis la saxeexato dalka Masar, taasi oo itoobiyina ka cago jiidayos. Jaamacada carabta yaa iyadu cadaysay inay taageersantahay go,aanka dowlada masar ay ku diidantahay furitaanka Dhaamkan weyn.. Waxa halkaas ka soo muuqata khatar ah in dagaaal ku dhexmaro labadan dal webiga Nile ka.